Efa tsy azo idirana intsony ilay efitra natokana ho an’ny besinimaro itazanany ireo fiaramadidina tonga na miainga mitondra ny havany, raha tsy mandoa vola misakafo ao ambony. Ankoatra ny « hall » tsy hatafidirana afa tsy ny mpandeha kanefa ao no ahitana ny karazana tolotra toy ny fahana finday, fanakalozana vola vahiny, nanampy trotraka fa lavitra io toeram-pidirana io dia efa voasakana ireo mpanatitra ka voatery nisahirana nanosika ny entany samirery ireo mpandeha. Vitsy koa ireo irakiraka tazana.
Raha ny tafa manokana nifanaovana tamin’ny mpitandro filaminana dia tsy misy idiran’ny fanomanana ny fitsidihan’ny Papa François izao seho izao. Tranga fahita izany raha ny fampitam-baovaon’ny mpitandro filaminana hatrany noho ny hamaroan’ny mpandeha voromby sy ny fahafenoan’ny fiantsonan’ny fiara. Loharanom-baovao azo antoka hafa anefa nilaza fa mety vokatry disadisa nitranga ny sabotsy tolakandro teo. Teratany vahiny avy any Addis-Abeba izay nandeha Ethiopian Ailines mantsy no voatery nalain’ny mpitandro filaminana ny findainy. Nentiny nakana sary tao anaty seranana io rehefa avy namingavinga ny mpiasan’ny Mada Ozi izay misahana ny “visa” eny Ivato izy.